Global Voices teny Malagasy » Ejipta : mandrisika an’i Arabie Saoudite hampitsahatra ny fanavakavahana atao amin’ny vehivavy i Dalia Ziada · Global Voices teny Malagasy » Print
Ejipta : mandrisika an'i Arabie Saoudite hampitsahatra ny fanavakavahana atao amin'ny vehivavy i Dalia Ziada
Voadika ny 12 Marsa 2009 14:38 GMT 1	 · Mpanoratra Marwa Rakha Nandika Lila
Sokajy: Fitantanam-pitondrana, Fivavahana, Hafanàm-po nomerika, Lalàna, Tanora, Tsidika, Vehivavy sy Miralenta, Zon'olombelona
Amin'izao andro fahatsiarovana ny andro nahaterahan'ny Mpaminany Mohamed izao dia manentana ny olona rehetra i Dalia Ziada hanery an'i Arabie Saoudite hampitsahatra ny fanavakavahana atao amin'ny vehivavy Silamo manerana ny tany!
Nanomboka tamin'ny firesahana ity andro fankalazana ity tany Ejipta i Dalia:
Androany, Ejipta-ary Ejipta irery- no nankalaza ny andro masina nahaterahan'ny mpaminany Muhammad. Izahay Ejiptiana no miantso azy ity hoe “Mawlid Elnaby”. Amin'ity andro ity dia mividy tsindrin-tsakafo miavaka izahay (halawet elmwalid), mifamangy ny samy mpihavanasy ny olom-pantatra, ary ambonin'izany rehetra izany ny fankalazana fahatsiarovana ny mpaminany Muhammad.
Izao no antiny nahatonga ny fanentanany:
Taorian'ny vavaka mitataovovonana dia tonga tao an-tsaiko ny hevitra handeha hanao fivahinianana masina any La Mecque hamangy ny fasan'ny mpaminany.
Nahatezitra azy ny vokatr'izay:
Tsy nahazo nanatanteraka “O'mra !” aho [ny fanao farany kely indrindra any La Mecque] Nahoana? Satria aho tanora zazavavy latsaky ny 45 taona! Ny vahaolana tokana azoko atao hahazoako miditra ny tanin'ny mpaminany mamiko dia ny hoe tsy maintsy miaraka amina mpiaro lehilahy aho. Mbola tsy ampy taona ko any reniko!!! Fantatrao moa hoe iza izany mpiaro lehilahy izany? Ny havana lehilahy akaiky anao indrindra: ray, anadahy, vady, na zanaka lahy! Misalasala be aho noho izany. Efa maty ny raiko, tsy dia taitra amin'izany loatra ny anadahiko anankiroa ary tsy afaka miantoka ny saran-dalany manaraka ahy aho, mbola tsy manam-bady aho ary mazava ho azy fa tsy manana zanaka lahy!! Dia inona izany no hataoko?!
Fa ny tena nahatezitra ity tanora ity:
Nandeha lavitra be aho vao tonga aty Arabie Saoudite. Tena irery aho! Tsy nanao zavatra tsy nety aho ary tsy mbola niharan'ny zavatra tsy nety nandritra ny fivahinianana nataoko tany am-pitan-dranomasina!!
Ambonin'ny fahafantarany ny lalàna fanampiny, dia henony koa fa:
Ny fanerena tahaka izao dia noforonin'i Arabie Saoudite ho azy manokana fa tsy misy ifandraisany amin'ny finoana Silamo! Noho izany, misakana ny 1/3 ny vahoaka Silamo (vehivavy) manerana ny tany ny governemanta any Arabie Saoudite amin'ny fivavahana nandidian'i Allah hotanterahany! Iza no milaza fa ny tenin'ny governemanta any an-toerana no ambony noho ny tenin'i Allah?! Iza no nilaza tamin-dry zareo fa fananany manokana i la Mecque sy ny mpaminany Muhammed ka afaka mamorona lalàna ho azy izy hampitandremana izay rehetra te hamangy any an-toerana?!
mampifandray ny heviny mikasika ny fanavakavahana amin'ny an'ny namany any Arabie Saoudite i Dalia:
Ankehitriny, tsy misy resaka! Arabie Saoudite no mpanao tsinontsinona indrindra ny zon'ny vehivavy aty amin'ny faritra misy antsika. Tsy avelany hampiseho tarehy ny vehivavy, tsy mahazo mitondra fiara, tsy avelany miasa aza ary tsy mahazo mifangaro amin'ny lehilahy! Mampiasa ny anaran'ny Silamo i Arabie Saoudite amin'izany fanitsakitsahana mahatsiravina ny zon'ny vehivavy izany. Ovany ny sarin'ny fivavahantsika feno fandeferana. Kanefa, tsy avy any Arabie Saoudite aho; nahoana no tsy maintsy manaraka izany lalàna izany? Tena tsy rariny!
Andeha hiverenantsika ny nahaterahan'ny mpaminany:
Na eo aza izany rehetra izany dia tsy mankalaza ny andro nahaterahan'ny mpaminany i Arabie Saoudite. tsy mankalaza izay na dia 1) teraka tany an-toerana ny mpaminany Muhammed; 2) Tany an-toerana no nanombohany ny fivavahana Silamo; 3) tany arabie Saoudite no nandaniany ny androny rehetra; 4) noraisin'ny governemanta ho azy ny fananan'ny mpaminany rehetra. Noho izany, nahoana no tsy mankalaza ny andro nahaterahan'ny mpaminany izy? Tsy mahatsiaro akory ity andro ity izy ireo, izahay-Silamo Ejiptiana- ve no manao zavatra mifanohitra amin'ny fivavahana?!!!
Miantso àry i Dalia ny:
Ny vehivavy eran-tany, Silamo mivoatra, ary ireo rehetra manaiky ny zon'ny vehivavy ao amin'ny tontolon'ny fivavahana Silamo mba hanaraka ahyhiady amin'ny governemanta any Arabie Saoudite hahazoako ny zoko (amin'ny maha vehivavy ahy) hahafahako mivavaka ao anatin'ny fiadanana tanteraka, ho afaka amin'ny fangejana ataon'ireo tsy te hahalala sy tery saina tahaka an'i Arabie Saoudite .
Tsy manana “lalàna azy manokana” amin'ny fivavahana Silamo i Arabie Saoudite!
Manenjika ny fomba fitondrana ny vehivavy any Arabie Saoudite ho tahaka ny zaza tsy ampy taona ny Muslimah Media Watch .
Ny mpitondra tenin'ni Arabie Saoudite ao amin'ny Kaomision'ny Zon'Olombelona, Zoheir al-Harithi, no nilaza fa tsy mahakasika ny ezaka hatao hanatsarana ny toe-draharaha izany na dia mifangaro amin'ny pôlitikan'ny fanjakana aza. Miobon-kevitra amin'ny hevitra sasantsasany izahay ary mandinika izany ny governemanta, kanefa kosa tsy miombon-kevitra amin'izy rehetra.”
Afaka alaina ny resaka rehetra, mahakasika ny tsy fanajana ny zon'olombelon'olombelona avy amin'ny mpiantoka lehilahy sy ny fanavakavahana any Arabie Saoudite.
Nanokatra Facebook ho an'ny fanentanany ataony i Dalia Ziada.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2009/03/12/1947/